कृषि शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २८, चितवन । रोजगारीका राम्रा अवसर आउन थालेपछि कृषि शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
एएफयुकाउपकुलपति प्रा. डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल यस विश्वविद्यालयमा कृषि पढ्न गतवर्ष ४ हजारले आवेदन दिएकामा २१५ जनाले मात्रै पढ्ने अवसर पाएको बताउनुहुन्छ । त्यही हाराहारीमा त्रिविमा विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन् । एएफयुले कृषि स्नातकका लागि रामपुरमा १६५ र पोखराको पुरनचौरमा ५० जनामात्रै विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ ।
त्रिविले लम्जुङको सुन्दरबजारमा ५० र कपिलवस्तुको पक्लिहवामा ५० विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ । त्रिविको सम्बन्धनमा निजी क्षेत्रबाट दाङमा दुई वटा क्याम्पसले ५०÷५० र बैतडीको गोकुलेश्वरमा ५० विद्यार्थी पढाउँछन् । पूर्वाञ्चलको सम्बन्धनमा निजी कलेजले भरतपुरमा ५० र काठमाडौँमा ५० विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन् । दश हजारको हाराहारीका विद्यार्थी कृषि पढ्न इच्छुक भएपनि समग्रमा वार्षिक ५६५ जनाले मात्रै नेपालमा कृषि शिक्षा पढ्न पाउने उपकुलपति ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कृषिसँगै भेटेनरी र मत्स्य विज्ञानमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ ।
गतवर्ष एएफयुमा मात्रै ५० भेटेनेरीका लागि १ हजार २०० र १६ जना मत्स्यविज्ञानका लागि कोटा छुट्याइएकामा ४०० विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. मनराज कोलाक्षपति विद्यार्थीको मागसँगै विश्वविद्यालयले १० वटा आंगिक क्याम्पस खोल्न सिनेटले पारित गरिसकेको बताउछन् ।
आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न तराईमा ८ बिगाहा र पहाडमा १ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने शर्त पूरा गर्ने क्याम्पसमा क्रमशः पढाइ शुरु गर्दै जाने भएकाले चालू शैक्षिक सत्रमा एउटा क्याम्पस सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको र सर्त पुरा भएका अन्य क्याम्पस क्रमशः थपिँदै जाने रजिष्ट्रार प्रा.डा. कोलाक्षपतिको भनाइ छ ।
विगत १ दशकमा कृषि पढ्ने छात्राको संख्या निकै बढेको देखिएको छ । एएफयुका उपकुलपति ढकालका अनुसार कृषि पढ्न रुचाउने छात्राको प्रतिशत ४० नाघेको छ । विगतमा न्यून मात्रामा छात्रा कृषि पढ्न आउने उनले बताए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले उत्पादनको क्षेत्रमा जति नै जनशक्ति भए पनि अपुग हुने बताउछन् । विदेशमा पनि यसको माग निकै बढी भएकाले पछिल्लो समय विद्यार्थीको रोजाइ कृषि शिक्षा बनेको उनको भनाइ छ ।
हिजोसम्म परम्परागत खेती प्रणाली रहेको भन्दै उनले व्यवसायीकरणसँगै नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा कृषि अध्ययन गरेका जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ । कृषि अध्ययन गरेका कोही पनि बेरोजगार नभएको भन्दै उनि रोजगारीभन्दा स्वरोजगारतर्फ पनि लाग्नेहरुको संख्या बढेर गएका छ भन्नुहुन्छ । नेपालमा कृषि शिक्षामा विद्यावारिधि गर्नेहरु पनि निकै बढेर गएका छन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपालमा मात्रै एक सयभन्दा बढीले विद्यावारिधि गरेको अनुमान छ ।
« शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो (Previous News)
(Next News) भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनमा पढाउनुपर्ने बाध्यता »
माघ २४, बाबियाचौर, म्याग्दी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२, भगवतीका एक कृषकले एउटै बोटमा साढे १४ किलोग्राम तौलपूरा पढ्नुहोस्
२३ माघ, नुवाकोट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मातहत रहेका कृषि सेवा केन्द्र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकोपूरा पढ्नुहोस्
व्यावसायिक कृषि गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत महिला
रासायनिक मलले उर्बर माटो बिग्रँदै, विकल्प खोज्दै किसान
गौशालालाई कृषिमा आधारित औधोगिक नगर बनाउने – मन्त्री पोखरेल